DAAWO SAWIRADA: Farsamoyaqaan Naftiisa Halis geliyey. - iftineducation.com
DAAWO SAWIRADA: Farsamoyaqaan Naftiisa Halis geliyey.
iftineducation.com – Dalka China, nin doonayay in uu hagaajiyo (Cilad bixiy)Makiinad nooca dharka lagu dhaqo ah ayaa lagu soo waramayaa in ay qabsatey arrin halis gelisay naftiisa.
Ninkan ayaa la sheegay in uu Madaxa Gashtey Makiinada, ayna adkaadey in uu dib ugala baxo, sida aad ku arkeyso sawirada laga qaadey ninkaasi, intii uu qatartaasi ku dhex jirey, laguna howlanaa sidii loo bad-baadin lahaa.
Waxaa lagu soo waramayaa in Makiinada oo Shidan ay cilad ku timid, isagana uu dhowr meelood isku dayay in uu cilada ka hagaajiyo, balse markii ugu dambeysay uu madaxa geliyey meesha Godka ah, si uu u eego gudaha makiinada.
Laakiin xaalad aan Caadi ahayn ayaa qabsatey, kadib markii uu doonayay in uu madaxa banaanka ula soo baxo oo ay u suuroobi weysay.
Dadkii Guriga la degenaa oo Qeylada ninka ku soo baxay, Mashiinka in ay demiyaan wey u suuro gashay, hase yeeshee waxaa u suuro geli weysay in ay madaxa ninkaasi banaanka uga soo saaraan.
Hase yeeshee, Markii dambe waxay gaartey in loo yeero kooxda xaaladaha deg dega ah ee magaaladaasi, kuwaasi oo Qalab ku jeexey Makiinadii.
Laakiin, waxaa la yaab sii noqotey markii madaxiisa meesha laga soo saarey in uu aad uga xumaadey makiinadii oo gebi ahaanba la jeex jeexey.
Maxaad ka taqaanaa Bisha Malabka?
Fanaan Caan ah oo Muqdisho ku geeriyoodey (WAA KUMA?)